नेपालको नयाँ संबिधानबारे गुल्मीबाट कस्ले के भने? – Gulmiews
नेपालको नयाँ संबिधानबारे गुल्मीबाट कस्ले के भने?
९ आश्विन २०७२, शनिबार १३:२९ Sanju Kauchha
No comments	दोस्रो संबिधानसभाको निर्बाचन पश्चात गठन भएको संबिधानसभाले नेपालको नयाँ संबिधान जारी गरेको छ । संबिधानको स्वागतमा देशभर दिवाली सहितका ¥याली भएका छन् भने कहिँकतै चित्त नबुझ्ने समुहले बिरोध पनि जनाएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को सन्दर्शमा गुल्मीबाट विशाल भट्टराईले संकलन गरेको संबिधान प्रतिको प्रतिक्रिया ।
अध्यक्ष, नेपाल बार एशोशियसन
यो प्रजातान्त्रीक संबिधान भएकोले धेरै कुरा राम्रा देखिन्छन् । तर केही जटिलताहरूपनि यसमा छन् । उत्कृष्ट संबिधान हुँदा हुँदैपनि मौलिक अधिकारको बिषय र प्रस्तावनालाई राम्ररी लेखिएको छैन् । पुर्खालाई गालि गरेर घुमाउरो प्रस्तावना लेख्नु हुँदैनथ्यो । संबिधानको ऐनाको रुपमा निकै छोँटो र खँदिलो प्रस्तावना लेख्नुपथ्र्यो । मौलिक हक अधिकारको बिषयमा निकै बृहत तरिकाले राखिएको छ ।
राजनीतिक रूपमा त्यो ठिकै देखिएपनि भोलि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउन पनि सक्छ । सर्बोच्चको फैसला अनुसार हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनो त्यो मुख्य बिषय हो । तर संबिधानसभाबाट बनेको संबिधान भएकोले यसमा जनताको अपनत्व छ । संघिय प्रणाली, विभिन्न जातजातीलाई बिशेष अधिकार, नागरिकताको पक्ष, संबैधानिक अंगको थप लगायतका बिषय यो संबिधानका सबै भन्दा उत्कृष्ट बिषय हुन् । कार्यापालीका, न्यायपालीका र ब्यवस्थापिकाको संरचना पनि निकै ब्यवस्थित तरिकाले राखिएको छ ।
अधिवक्ता तथा प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र
नेपालको संबिधान २०७२ नेपाली जनताको युगौँ देखिको परिवर्तनकारी भावनाको प्रतिविम्ब हो । यो संबिधान नेपाली समाजको लागि लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र संन्तुलित विकासको माध्यमबाट दिगो सम्बृद्धि हाँसिल गर्ने उत्तम साधन हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । जनतामा निहित सम्प्रभुताको उच्चतम प्रयोग गर्दै जनप्रतिनिधिहरूको निरन्तर प्रयासबाट निर्माण भएको यस संबिधान भीत्र तराई, पहाड, हिमाल तथा मेची –महाकालीका सबै जनता अटाएका छन् । लोकतन्त्रका आधारभूत आदर्शहरूलाई अंगीकार गर्दै सामाजिक न्याय र दिगो विकासको अभीष्ट बोकेको यो संबिधान नेपालको राजनीतिक एवम संबैधानिक इतिहासमा युगान्तकारी उपलब्धि हो । संबिधान आफैमा पूर्ण हुँदैन, यसले भविष्यमा असल नेतृत्वको अपेक्षा राख्दछ । कुशल नेतृत्व क्षमता बिना असल संबिधान पनि निरर्थक हुन्छ । विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय लगायतको पूरा गर्न बाँकी अभिलाषाहरूलाई भविष्यमा पनि समाबेश गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने छ भन्ने विश्वास राख्दछु । नयाँ संबिधान मार्फत एकता र संबृद्धिको कामना गर्दछु ।
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली महिलाहरूले नागरिकतामा आफ्नो पहिचान पाउने भएका छन् । उनीहरूले अब आफ्नो सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने छन् । यसलाईनै हामीले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ । यो नै संबिधानमा भएको बिशेष कुरा हो जस्तो लाग्छ । महिला अयोगलाई संबैधानिक आयोग बनाउने र महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संबिधानले जोड दिएको छ । त्यसैले यो संबिधानलाई अहिले सम्मकै अग्रगामी संबिधानको रुपमा लिनुपर्छ । यद्यपी महिलाहरूका केही कुराहरू अझै संबिधानमा अटाएका छैनन् तर भोलिका दिनहरूमा संबिधान संसोधनबाट ती कुराहरू अटाउने छन् । महिलाहरूका साझा मुद्धाको लागि दुई तिहाइले संबिधान संसोधन गर्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
महासचिव, गुल्मी उद्योग बाणिज्य संघ
मैले संबिधान आउनुलाईनै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानेको छु । बहु प्रतिक्षित संबिधान नेपालले पाएको छ । पक्कैपनि यसले धेरैलाई समेटेको छ ।
हामी उद्योगीहरूले संबिधानको पूर्ण रूपमा स्वागत गर्दछौँ र संबिधान कार्यान्वयन सहितको कानुनि राज्यको अपेक्षा पनि गर्दछौँ । संबिधानले धेरैलाई समेटेको छ । एकाध समूह तथा क्षेत्रहरू बाहिर रहेको देखिएपनि आगामी दिनमा संबिधान संसोधन हुँदा उनीहरूका माग पक्कै पूरा हुने छन् । त्यसैले सबैले नेपालको नयाँ संबिधानलाई स्वागत गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले मस्यौदा संबिधानमा परिमार्जनका लागि दिएको सुझाव पूरै समेटिएको त छैन तर आगामी दिनमा हाम्रा सुझावहरू समावेश होलान भन्ने विश्वास छ । उद्योगी ब्यवसायीहरूलाई शान्ति सुरक्षा र लगानीको वातावरण चाहिएको छ । यो संबिधानले कानुनि राज्यको रूपमा लगानीबो वातावरण बनाउने विश्वास लिएका छौँ । ऐन, कानुनहरू बन्दा संबिधान चित्त नबुझाउने समुहहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दा राम्रो हुने पनि देख्छु ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनीधी
आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउने नेपाली नागरिकको वर्षौंदेखिको सपना पुरा भएको छ । लामो संक्रमणलाई चिर्दै संविधान जारी हुन लागेको खुशीमा देशभर उत्साहसँगै दिपावली भएको छ । तर ज्याला मजदुरी गरिखाने वर्गमा संविधानले के दिन्छ भन्ने जानकारी सम्म छैन । उनीहरुलाई जे भएपनि ढुक्कसँग गरिखान पाउने वातावरण बनोस् । एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई ज्युँदै जलाएको हेर्ने र सुन्ने वातावरण हुनुहुँदैन । आफ्नै बुबाबाट छोरी तथा छोराबाटै आमा बलात्कृत हुने गरेको अवस्थामा यो संविधान सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने नेपाली उखान जस्तो बन्नु हुँदैन् । बिपक्षी दलहरुलाई सहमतीमा ल्याइ उनीहरुको जायज मागलाई संबोधन गर्न सके मात्र गणतन्त्र, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता र संघियता संस्थागत विकास हुने छ । तव मात्र त्यो संविधान जनमैत्री संविधान हुनेछ ।
हामीले बर्षौँ देखि जातिय विभेद खेप्दै आएको छौँ । अहिले दलितको संबैधानिक अयोग बनेको छ । यो आयोगले मुद्वा पनि चलाउन पनि सक्ने भएकोले सबै भन्दा राम्रो पक्ष यो । निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । जातिय विभेद हटाउने कुरामा राज्यको तत्परता जस्तै देखिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ । संबिधान समावेशी पनि देखिन्छ । तर केही कमजोरी पक्कैपनि छन् । प्रतिनिधि सभामा ठ्याक्कै कति प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व भन्ने उल्लेख गरिएको छैन् । दलित निर्बाचित क्षेत्र भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । दलित महिलाको बिषयमा पनि संबिधानले बोलेको छैन् ।